संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्दै, ६०/४० प्रतिशतकै भागबन्डामा जाने तयारी - Machhapuchhre FM
विश्वकपको पहिलो खेलमा साउदीविरुद्ध रुसको शानदार जित
मैदानमा प्रवेश गरेको ८९ सेकेन्डमै रुसी खेलाडी जुबाले गरे गोल
एडीबीमा कार्यरत सुवेदीलाई सरकारले फिर्ता बोलायो, राससको अध्यक्षमा श्यामल, एनटीभीको अध्यक्षमा महेन्द्र बिष्ट नियुक्त
साउदीविरुद्ध रुसकाे दाेस्राे गाेल
विश्वकप २०१८ काे पहिलो गोल गाजिन्स्कीकाे नाममा
London, SE2 9TL
सिधा कुरा जनातासँग
उत्कृष्ट नेपाली गीत
नेपाली पोप गीत
नेपाली लोक गीत
merry christmas 2018 merry christmas 2018 Happy New Year 2019 Happy New Year 2019
करेन्ट लागेर इलाममा एकजनाको मृत्यु
सर्वदलीय बैठक कहिले ? प्रदेश प्रमुख र राजधानीको विषय अन्यौलमा
संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्दै, ६०/४० प्रतिशतकै भागबन्डामा जाने तयारी
Published by Machhapuchhre FM at 2018-01-14
काठमाडौँ,पुस ३० । राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार, प्रदेश सरकार गठन लगायत विषयमा मापदण्ड तयार गर्न नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले बनाएको संयुक्त कार्यदलको बैठक आज बस्दै छ । दुई दलबीच एकीकरण र गठबन्धनका गर्दाका समयमा भएका सहमतिलाई आधार मानेर गृहकार्य गरिरहेको कार्यदलको बैठक बस्न लागेको हो ।
अपरान्ह् बस्ने बैठकमा सरकार गठन र पार्टी एकताको तयारीमा रहेका एमाले र माओवादी ६०/४० प्रतिशतकै भागबन्डाको विषयमा समेत छलफल हुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रदेश मुख्यमन्त्री र सभामुख पदमा यसअघिकै जस्तो ६०/४० प्रतिशतका आधारमा भागबन्डाको तयारी गरेका हुन् । यसअघि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा एमालेले ६० र माओवादीले ४० प्रतिशत भागबन्डा गरी उम्मेदवार तय गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा चुनावको परिणाम भने ७० र ३० को अनुपातमा आएको थियो । प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना उम्मेदवार तय गर्नुपर्नेछ । ६० / ४० प्रतिशत भागबन्डा गरे एमालेको भागमा ३३ र माओवादीको भागबाट २३ जना उम्मेदवार हुनेछ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सभामुखको हकमा यो मापदण्डअनुसार एमालेको भागमा ४/४ र माओवादीको भागमा २/२ जना पर्नेछन् । वाम गठबन्धनको संयुक्त कार्यदलले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिस नगर्ने जनाएको छ। कार्यदलले उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड र आधार तय गरी नेतृत्वलाई सुझाव दिनेछ।
कार्यदलले उम्मेदवार छनोटका चार आधार यसअघि नै तय गरिसकेको छ । कार्यदलले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा सम्वन्धित दलहरुले नै उम्मेद्वार चयन गर्नेछन् । कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ्ग, शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन् भने माओवादीका तर्फबाट रामबहादुर थापा बादल, वर्षमान पुन र मातृका यादव रहेका छन् ।
Source: News 24 Nepal ले छापेको छ ।
दशैमा लगादिने टिका र दिईने आशि...
दशैं र साहित्य एक अर्काको परिप...
दसैं हिन्दू धर्मावलम्वीको मात्...
किन विवादित बन्दैछ दसैं ? - PO...
अन्यत्र दशैंको चटारो, ललितपुरक...
दसैं मान्न स्वदेश फर्केकाको खु...
दुई महिनामा दुई खर्बको आयात, अ...
नेपालीको दसैं खर्चः ५ अर्बको म...
बजेटभन्दा बढीको आयात मात्रै ! ...
Show all of Power News
बोल्दा बोल्दै आँसु झर्यो मदन कृष्णको, हरिवंश भावुक। हासो र आसुको बेजोड संयोग दसै विशेष कार्यक्रम।
अति गरीवको सुचिमा पूर्व मन्त्री लगायत हुने खानेहरु । ठगिनेकै विरुद्ध बिप्लव कार्याकर्ताको प्रयोग ।
ढुवानी गर्दा नै यसरि मर्छन खसी बोका,यसरी ब्यापार गर्दै वीर अस्पतालका कर्मचारी !
थाहै नपाई जग्गा अर्कैको नाममा,मालपोत प्रमुखनै पक्राउ।दुतावासका कर्मचारी नेपालीलाई यसरि हप्काँउछन् !
Sajha Sawal । साझा सवाल अङ्क-५२९ – दशवर्षमा के फेरियो, के फेरिएन ?
Sajha Sawal । साझा सवाल अङ्क ५२८ – सप्तरीका शीतलहर प्रभावितको सकस
Sajha Sawal । साझा सवाल अङ्क ५२७ ‘काठमाडौं शहरभित्रका रैथानेहरुको कथा’
Sajha Sawal । साझा सवाल अङ्क ५२६ संघर्षरत महिलाहरुको कथा
Sajha Sawal । साझा सवाल अङ्क ५२५
विश्वकपको पहिलो खेलमा साउदीविरुद्ध रुसको... --
मैदानमा प्रवेश गरेको ८९ सेकेन्डमै रुसी ख... --
एडीबीमा कार्यरत सुवेदीलाई सरकारले फिर्ता... --
साउदीविरुद्ध रुसकाे दाेस्राे गाेल... --
विश्वकप २०१८ काे पहिलो गोल गाजिन्स्कीकाे... --
श्रीनगरमा वरिष्ठ भारतीय पत्रकारको गोली ह... --
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको भव्य उद्घाट... --
मोहम्मद सलाह शत प्रतिशत फिट, विश्वकप खेल... --